केपी ओली सकुनीको भूमिकामा छन् : प्रचण्ड - Vision Online News
भिजन अनलाईन न्युज संवाददाता प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:४२ 193 पटक हेरिएको
काठमाडौं, फागुन १५ ।
नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकुनीको भूमिकामा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार पार्टीसम्बद्ध शिक्षकहरुको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जेलमा बस्दा महाभारत र चाणक्यबाहेक केही पढेनछन् । सकुनी खुब मनपर्छ उनलाई ।’
सकुनी महाभारतका चर्चित पात्र हुन्, जसले पाँच पाण्डवलाई वनबास पठाउन भूमिका खेलेका थिए । सकुनीलाई छलकपट र अन्यायका प्रतीकका रुपमा चिनिन्छ । विचार, सिद्धान्त र इमान्दारितामा कुनै मतलब नभएको तथा जालझेल मात्र जानेको भन्दै प्रचण्डले पूर्वसहकर्मी एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकुनीसँग तुलना गरे ।
उनले आफूहरु नै आधिकारिक पार्टी भएको भन्दै जनतालाई प्रष्ट पार्न पार्टीनिकट शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे । त्यसको शर्त पहिले शिक्षकहरु नै प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘तपाईहरुलाई पनि डर लाग्छ होला, माओवादी नै भइयो कि क्या हो ? प्रचण्डको कार्यकर्ता भइसकियो त ? एमाले त केपी ओली भन्छन् भनेर तपाई धरमराउनुभयो भने यता माओवादीमा बल्ल माधवको फेला प¥यो, थाहा पाउँछन् नि केही दिनपछि‍… यस्तो पारिदिन सिपालु छन् केपी ।’
यद्यपि पहिलो ब्याटल आफूहरुले जितेको उनले सुनाए । संसद पुनर्स्थापनाकाे ब्याटल सडकबाट जितेको र न्यायालयले पनि आफूहरुलाई न्याय दिएको प्रचण्डले बताए ।
जर्ज फ्लोयडको घाँटी थिचेर हत्या गर्ने प्रहरी अधिकारी डेरेक चुविन हत्यारा साबित 53 views
प्रदेश ५ मुख्यमन्त्रि पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता 42 views